Lezie anya maka mma n'ile egwu egwu na ịrị elu ụlọ elu
Ụlọ elu na ịrị elu ụlọ iji egwu
Ihe eji egwuri egwu osisi n'oge niile
Ụmụaka bụ ndị na-eme nnyocha na ndị nchọpụta, ndị na-amaghị nke ọma na ha nwere ọchịchọ ịmata ihe na egwu ha. Maka nke a, ihe eji egwuri egwu kwesịrị ịdị siri ike ma dịgide.
Ụmụaka na-arụsi ọrụ ike chọrọ ihe eji egwuri egwu
Karịsịa mgbe oge ọkọchị, nke na-akpọ gị òkù ka ị na-emefu oge n'èzí, dị mma, echiche maka egwuregwu ọhụrụ nwere ike ịba uru. Ụmụaka na-egwu egwu n'èzí n'ogige ma ọ bụ na egwuregwu ọ bụla.
Nchebe mgbe ị na-egwu egwu
Egwuru egwu n'okporo ámá nwere ike ịbụ ihe dị mma maka ịgagharịgharị na ụgbọala, ma ubi nke aka gị ka bụ ebe kacha mma.
Nke a nwere ike ịbụ slide, swing na ájá. Mgbe nna na-ekwu ya nke ọma, ọ na-ewu ụlọ elu egwuregwu dị mma, ebe ndị obere knights na ndị ọrụ ụgbọ mmiri nwere ike ịbanye n'ime ụwa ha.
Ihe eji egwuri egwu osisi ka na-ewu ewu
Iji nọrọ n'ụlọ elu egwuregwu ruo oge ụfọdụ, ọ bụghị naanị na nsụgharị dị iche iche na-ewu ha, kamakwa na ihe dị iche iche. Mana osisi a ejiriwo nke oma puta ebe a, obughi nani n'ihi ala di nma, kamakwa n'ihi ogologo oge ya.
Maka nke a, ọ dị mkpa na ụlọ elu ahụ nwere osisi dị elu na ezigbo ọrụ. Ndị nna na-arụ ọrụ aka nwere ike ịmepụta ya site na posts na osisi squared onwe ha. O doro anya na osisi kwesịrị iji sanded mee ihe na nrụgide-ka ọ ghara ime ka ọ ghara ịhapụ àgwà ndị na-emerụ ahụ na ngwọta.
A na-emepụta ihe ndị a na-ere ahịa na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ma ọ bụ naanị na a ga-eji nkà na ngwá ọrụ na-ezukọ. Ọ bụrụ na nrụpụta enweghị ike ime n'onwe ya, ndị nne na nna kwesịrị ịṅa ntị ma onye na-enye ọrụ na-enye ọrụ ọrụ ahụ.
Mgbe oge a na-emepụta ihe n'ubi ahụ, ụmụ ahụ na-agbakwụnye ọzọ n'ime ụlọ ahụ. N'ebe a kwa, ihe eji egwuri egwu nke eji osisi eme ihe di mkpa. Ma eleghị anya, ọ bụ n'ihi na isiokwu nke nkwado na-aghọwanye ihe dị mkpa karị, kamakwa ịdị nso na okike na ogologo oge na-agwụ ike na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ihe onwunwe.
Ngwá egwu osisi
Ọ dị mwute ikwu na plastik na-abụkarị mgbe ọ bụla n'ihi na ọ bụ ndị na-emerụ emerụ ma ọ bụ ndị na-agbagha agba agba na ndepụta, karịsịa na ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ka o sina dị, ejiji osisi agaghị azụta n'emeghị ka ọ dị ala, n'ihi na ọbụna ihe a nwere ike ịnwe ihe ndị na-emerụ ahụ na ihe osise. E nwere ike ịhụ ezigbo mma n'ahịa ndị ọkachamara nke ụdị nke a marala ọtụtụ afọ.
Ihe eji egwuri egwu ụlọ ahịa
Ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile na-eji egwuri egwu na-egwuri egwu, ọ bụrụgodị na nke ahụ anaghị agba agba ma na-agba. Ụlọ ahịa na-ere mkpụrụ osisi, àkwá, ice na soda karama nke osisi, ụgbọ okporo ígwè, egwuregwu bọmbụ, egwuregwu mgbagwoju anya na egwuregwu agụmakwụkwọ niile dị elu ma na-eduhie eduhie, na-enye ụmụ nke afọ ọ bụla obi ụtọ na-egwu.
Na ihe egwuregwu ndị a, ihe ụtọ nke ihe ndị ahụ nwere ike ịdịgide karịa otu ọgbọ.
Ụmụaka ga-amụta igwu egwu ma hapụ
Nwa nwoke na nwa agbọghọ na-egwuri egwu
Egwuregwu agba agba agba
Egwuru osimiri obodo
Ntak emi nditọwọn̄ ẹnamde utom?
Ịhụnanya maka ezigbo enyi gị
Otu echiche maka "Ụlọ Egwuregwu na Ịrịgo Elu"
Oli ekwu, sị:
26. January 2016 na 23: elekere 45
nke ahụ bụ onyinye dị ukwuu ịrị elu. Ọzọkwa, echere m na ịrị elu ụlọ elu na ihe eji egwuri egwu yiri nke ahụ bụ ihe onwunwe nye ụmụaka na ubi. Karịsịa n'ihi na n'oge a, a na-ebuwanye ụmụaka site na ngwa ngwa ọ bụla nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ n'enweghị mmega ahụ, na-akpata ihe niile ọ rụpụtara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe dị mma maka ụmụaka nwere ogidi ụlọ elu, mgbe ahụ àgwà kachasị mkpa. Nke a abughi naanị na-emetụta nkwụsi ike nke akụrụngwa ahụ, kamakwa nhazi nke ọma na nke a haziri nke ọma nke na-ewepu ihe iyi egwu ma si otú a belata ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ. Ụlọ elu ndị na-arị elu dịka DIN EN 71-8 si ewere ya kpọmkwem na akaụntụ.
Otú ọ dị, akụkụ ọzọ dị mkpa nke àgwà m, bụ na ọ dịghị ihe nrụgide na-emetụtaghị. Na osisi kwesịrị ekwesị (dịka Nordic spruce) na mmiri nke mmiri na-adabere na gburugburu ebe obibi, otu nwere ike ịrụpụta ihe ruru otu ntachi ahụ. Nke a na-echebe ọ bụghị nanị gburugburu ebe obibi, kamakwa ụmụ ya sitere na mmiri mmiri nke mmiri ọkụ ọkụ na-emetụta impregnation.
Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-azọrọ na a gaghị asacha ya, ma ọ dị mwute ikwu eziokwu na-egosi. Ya mere, maka m, ọ bụ naanị ụlọ nche ụlọ na-enweghị ihe ọ bụla.